प्रदेश ५ मा परीक्षण किट सकिएपछि पीसीआर परीक्षण रोकिँदै « Chhahara Online
प्रदेश ५ मा परीक्षण किट सकिएपछि पीसीआर परीक्षण रोकिँदै
१८ जेठ । प्रदेश ५ मा कोभिड–१९ परीक्षणमा आवश्यक र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) र भीटीएम किटको अभाव भएको छ । किट नहुँदा भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा दुई साता बसेकामध्ये कुनै लक्षण नदेखिएकाको आरडीटी र लक्षण देखिएकाको पीसीआर परीक्षण रोकिएको छ ।
देशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीका अनुसार शनिबारसम्ममा क्वारेन्टाइनमा १४ दिन पूरा गर्नेको संख्या झन्डै पाँच हजारभन्दा बढी छ । अधिकांशमा कुनै लक्षण देखिएको छैन । लक्षण नदेखिए पनि आरडीटी गरेर घर पठाउने सरकारको योजना थियो । ‘तर अहिले प्रदेशमा आरडीटी किट नै छैन,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै आउने अवस्थामा छ ।’ प्रदेशका १ हजार ३ सय १२ क्वारेन्टाइनमा शुक्रबार साँझसम्ममा ३३ हजार ५ सय ६ जना छन् । तीमध्ये ११ हजारभन्दा बढीको सोमबार १४ दिन पुग्दै छ ।
गुल्मीमा १ हजार ८ सय ९ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । तीमध्ये २ सय ५० भन्दा बढीको बसाइ अवधि पूरा भएको छ । तर परीक्षणबिना पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. भवानी शर्माले बताए । ‘भीटीएम १ सय २० र आरडीटी दुई सयजति छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेकाले दुवै किट अभाव छ ।’ दुवै किट तीनरतीन हजार थान माग गरेको भए पनि उपलब्ध नभएको उनले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख दिनेश चापागाईंले शनिबारसम्ममा तीन हजार थान भीटीएम स्टकमा रहेको बताए । आरडीटी किट भने शून्य छ । सोमबारसम्ममा आइपुग्ने जानकारी आएको उनले बताए । ‘भीटीएम दुई हजार र आरडीटी २५ हजार आउने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘तराईका जिल्लामा भीटीएम र पहाडी जिल्लामा आरडीटीको माग बढी छ ।’ तर धेरै स्थानीय तहले आफैं पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकाले ठूलो समस्या नरहेको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै किट अभाव भएकाले १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेकालाई थप सात दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाउने विषयमा छलफल चलेको खबर कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।